Vavaka fanasitranana hahasitrana haingana ny fahasalamanao. ?
Manasitrana vavaka mba ho sitrana haingana ny fahasalamanaoTonga amin'ny famenon'ny fitsaboana ny lehilahy izany. Rehefa mivavaka ianao, dia mihamatanjaka kokoa ny filanao an'Andriamanitra, izay hahita fomba mety hanasitranana anao.
Ity fanafody ity dia mety manondro dokotera tsara kokoa, ohatra. Amin`ny toe-javatra sasany, dia mety ho avy avy amin`ny fahitana fitsaboana vaovao na fanafody. Ny fahasitranana dia mety ho tonga amin'ny alàlan'ny fahagagana iray.
Saingy, mba hisehoana izany, ilaina ny manatanteraka ny vavaka fanasitranana amin'ny herinao rehetra ary mitoetra hatrany amin'ny finoana izay azonao mivoaka amin'ity fepetra ity. Ny Optimism no fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana aretina rehetra.
1 Manasitrana vavaka mba ho sitrana haingana ny fahasalamanao
2 Vavaka ho an'ny fahasalamana
3 Ny vavaka atao amin'ny aretina
4 Ny vavaka fanasitranana mahery
5 Ny vavaka ho an'ny fahasalaman'ny olona iray.
6 Ny vavaka ho an'ny Arkanjely Saint Raphael hangataka fanasitranana an'io aretina io
7 Ny vavaka ho an'ny Tompontsika an'i Fatima hangataka fahasalamana.
8 Ny maha-zava-dehibe ny vavaka fanasitranana
Na dia efa nanokatra ny masony amin'ny fitsaboana kely mety ho sitrana aza ny dokotera, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra.
Miaraka amin'ny vavaka fanasitranana dia afaka mahazo ny fahagagana ianao ary manala ny aretina izay mahatonga anao hijaly be.
Ankoatra ny vavaky ny Salamo 133 sy ny vavak'i Archangel Raphael, izay efa nasehontsika teto dia misy hafa ihany vavaka mahery fanasitranana. Jereo eto ambany.
Vavaka ho an'ny fahasalamana
“Ry Raiko Tompo ô, dokotera masina ianao. Manome fiainana sy fiainana ho an'izay mitady anao ianao;
Izany no antony ankehitriny, Tompoko, amin'ny fomba manokana, te hangataka ny fanasitranana ny aretina isan-karazany aho, indrindra fa ireo izay mampahory ahy amin'izao fotoana izao.
Fantatro fa tsy mila ratsy ianao, tsy mila ilay aretina izay ny tsy fisian'ny fahasalamana, satria ianao no ilay Tsara Indrindra.
Miezaha miasa fanasitranana ara-panahy lalina amiko ary raha maniry ianao, dia fanasitranana ara-batana ihany koa.
Avelao hamboarina mivantana amin'ny asa mahery ny Fanahy Masinao na amin'ny alàlan'ny dokotera sy ny fanafody!
Ampitomboy ny finoako ny herinao, Tompoko, ary amin'ny fitiavanao infinito izay anananao ho ahy. Ampitomboy ny finoako, Tompoko, izay osa be indraindray.
Mino ny herin'ny fanasitranana anao aho, Andriamanitro ary mankasitraka anao amin'ny asa rehetra ataonao ao am-poko sy vatako amin'izao fotoana izao. Amena, ho tanteraka izany!
Ny vavaka atao amin'ny aretina
“Tompo ô, omeo fahasalamana ho an'ny vatako aho ary afaka miara-miasa amin'ny fiainana fifehezana mba ho mendrika ny fanampiana anao.
Tompoko, noho ny fanomezam-boninahitra anao sy ny fisaorana anao sy ny fiderana anao, ny fanananao manome voninahitra ahy indrindra, tsy mamela ahy tsy hahita izay ilaiko aho ary misatroka fahombiazana lehibe amin'ny dia rehetra izay tsy mora hatrany.
Rehefa midera anao aho noho ny hatsaram-panahy toy izany, isaorako, Tompo ô, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiainana masina.
Ianao izay manasa an'ireo izay tianao, tahaka ilay raiko izay manasazy ilay zanaka mpikomy izay tadiaviny, Misaotra anao aho nandritra ny fotoana nijaliako rehetra rehefa nahatsapa ny tànanao nilatsaka tamiko aho saingy feno famindram-po hatrany.
Endrika betsaka ny zavatra nianarako sy nianarako taminao, ry dada!
Tsy misy na inona na inona mety hifanandratra amin'ny fitiavanao.
Voavono tamin'ny làlan-tsambo maro ny lalan'izy ireo, fa izay mandeha eo aminy ihany no mahatsapa ny fahafinaretany miavaka. ”
Ny vavaka fanasitranana mahery
“Ry Jesosy Tompo ô, heveriko fa efa nitsangana ianao ary velona. Mihevitra aho fa nanatrika ny sakramentan'ny ôtely ianao mba hamahanana ahy; Heveriko fa mamaly ny vavak'izay rehetra mitady anao amin'ny fo ianao. Midera anao aho ary hidera anao. Misaotra anao aho Tompoko, tamin'ny nitiavany ny olombelona.
Tsy misy manadino anao, ianao no feno amin'ny fiainako, satria voavela heloka izahay, miaraka amin'ny fanampiana ataoko mitsidika ny fandriampahalemana sy ny fahasalamana. Manavao ahy ny herinao. Hotahiny ny filako ary amindrao fo aho.
Sitrano aho, Jesosy Tompo. Sitrano ny fanahiko, amin'ny fandresena ny ota. Sitrako ny fihetsem-poko, esory ny ratra vokatry ny ratra nataoko, ny fankahalana, ny fahasosorana na ny hatezerako.
Manasitrana ny vatako, manome ahy ny fahasalamako.
Androany, Tompo, manolotra aminao ny aretina izay mijaly aho ((ambarao mafy ny aretinao) ary mangataka aminao aho ho afaka tanteraka, toy ireo nitady anao fony ianao tety an-tany.
Mino aho fa mampanantena ny Teny: Izy tenany no nitondra ny fahotantsika tamin'ny vatantsika teo ambonin'ny hazo, mba hahafahantsika ho faty amin'ny ota ka ho velona ny rariny; ny ratra nataonao no nahasitrana anao. '(1 Pdr 2,24).
Matoky ny fitiavanao ahy ianao, ary na dia tsy misy valin'ny fiangaviana aza aho, dia manamafy izany amin'ny finoana aho: Misaotra anao Jesosy Tompo, noho ny tsodrano efa alatsakao ato amiko. ”
Ny vavaka ho an'ny fahasalaman'ny olona iray.
“Tompon'ny'izao rehetra izao, Mpamorona ny zava-drehetra.
Tonga amin'ny fanatrehanao indrindra aho amin'izao fotoana izao hangataka fanampiana amin'ireo izay mijaly amin'ny aretim-po na aretin-tsaina.
Fantatray fa amin'ny alàlan'ny aretina dia afaka manana fotoana fisaintsainana isika, izay tena mankasitraka anay, dia mampanatonay anay hanatona anao, amin'ny lalan'ny fahanginana.
Fa miangavy ny famindram-pony isika ary mangataka aminy: manitatra ny tananao mamirapiratra amin'ireo marary, mijaly fanaintainana, tsy fahatokisana ary fetra.
Avelao hatanjaka ny finoana sy ny fahatokisana ao am-ponao. Manala ny fanaintainany izy ireo ary manome fiadanana sy mangina.
Manasitrana ny fanahiny mba hamerenana amin'ny laoniny ny vatany.
Omeo fiononana, fanamaivanana izy ireo ary apetraho ny fony fahazavana ao am-pon'izy ireo ka, miaraka amin'ny fanohanan'ny fanantenana sy ny finoana dia mahatsapa ny fitiavan'izao rehetra izao.
Ho amintsika rehetra anie ny fiadananareo.
Ny vavaka ho an'ny Arkanjely Saint Raphael hangataka fanasitranana an'io aretina io
«S. Raphael, izay midika hoe "dokoteran'Andriamanitra" ny anarany, ianao, izay voampanga ho niaraka tamin'ny tovolahy Tobias teny amin'ny diany nankany amin'ny tanin'ny Mediana, ary rehefa niverina izy dia nanasitrana ny fahajambonan'ny dadan'i Tobias.
Saint Raphael, Ianao izay nanampy sy nanampy ny rain'i Tobias ho tanteraka ny faniriany sy ny faniriany dia mangataka aminao izahay ary mangataka fanampiana aminao.
Aoka ianao ho mpiaro antsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria ianao dia dokotera mpanao asa soa izay mandefa ny fahatokiany.
S. Rafael, sitrano aho amin'ny aretina rehetra.
Ataovy mahasalama foana aho, satria tsy hanajanona ny fanafahana anao izahay. Misaotra anao
Ho tanteraka tokoa izany. "
Mivavaha amin'ny razanay, fanta-daza Maria ary fitsanganana.
Ny vavaka ho an'ny Tompontsika an'i Fatima hangataka fahasalamana.
“Renin'i Fatima, Renim-pitiavana izay rehetra mijaly amin'ny vatana sy ny fanahy.
Karakarao ny fahasalaman'ny zanakao, manamaivana ny aretin'ny fanaintainana sy ny fanaintainana ary manalefaka antsika.
Angataho ny Zanakao malalanao izay nanasitrana olona mararin'ny olona tamin'ny fomba androny, hamindra fo aminay, ho herintsika. Aoka ny fijaliantsika ho azy. Andriamanitra anie hanome antsika fahasalamana mba hanompo azy mandrakariva, hifampiahy. Fa ambonin'izany rehetra izany dia tokony hatao ny sitrapon'Andriamanitra Ray, izay mikarakara antsika amin'ny fitiavana tsy manam-petra sy ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa. Raiso an-tanana izahay ry malala, ary ento mankany amin'i Jesosy izahay.
Ny maha-zava-dehibe ny vavaka fanasitranana
Rehefa marary isika, na ara-batana, na ara-panahy na ara-tsaina dia mitoetra ho famoizam-po. Maharary antsika koa izany aretina izany rehefa misy olon-tiana manana olana ara-pahasalamana. Amin'ireny fotoana ireny, ny fahafantarantsika fa misy olona atodika hanome fanampiana anay.
Tsy namela ny zanany foana Andriamanitra. Noho izany, ny maha zava-dehibe ny ny vavaka fanasitranana dia manome fampiononana antsika. Ity vavaka ity dia mitondra fahatoniana sy fanantenana amin'izao fotoan-tsarotra izao.
Imbetsaka no ahitantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra nefa tsy mahalala ny fomba hangatahana ny fanasitranana antsika, inona ny fiteny ampiasaina. Ny vavaka fanasitranana dia mitondra teny mety hoe, raha atao am-pinoana dia hanana hery lehibe hanasitranana antsika.
Ankafizo ny miaina ao anaty vavaky ny fanasitranana hanasitranana haingana ny fahasalamanao ary hianatra bebe kokoa momba ireo karazana Fahatelo misy.